Safar (bil) - Wikipedia
Safar () waa bisha labaad ee Kalandarka Hijriga. Bishani waxay ku dhamaataa 30 maalmood.
Bisha Safar waa bisha labaad ee maalintiriska Hijriga ah.
Ereyga Safar ee bishan loogu magac daray waa mid Af Carabi ah, kaasi oo macnahiisu yahay "wax madhan".
Hoos waxaad ku arkaysaa waa qiyaasta wakhtiga ay bilaamayso iyo dhamaanayso bishani (qiyaastani waxaa laga soo xigtay Maalintiriska Umm Al-Qura ee Sacuudiga):
Wakhtiyada bilaabmeyso bisha Safar ee sanadaha 2010 ilaa 2015
Kalandarka Islaamka (; at-taqwīm al-hijrī) (Cilmi Fallag ahaan loo yaqaano: Anno Hegirae ama AH) waa maalintiriska (Kalandarka) bulshada Islaamka kaasi oo loo yaqaano Hijri. Si la mid ah kaalandarka Miilaadiga ah, sanadka Hijriga ah waa labo iyo toban bilood kuwaasi oo leh 354 ama 355 maalmood (cisho).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Safar_(bil)&oldid=214947"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Agoosto 2021, marka ee eheed 01:38.